२२ फागुन । अमेरिकी सञ्चार उद्यमी रुपर्ट मर्डोकले फेरि अर्को विवाह गरेका छन् । सञ्चार उद्यमी मर्डोकले ८४ वर्षको उमेरमा चौंथो विवाह गरेका हुन् । मर्डोकले ५९ वर्षकी अभिनेत्री तथा मोडल जेरी हलसँग विवाह गरे । हलले सन् १९९२ मा बालीमा सर मिक जेगरसँग विवाह गरेकी थिइन् । तर पछि कानुनले त्यो विवाहलाई आधिकारिकता दिएको थिएन । अस्ट्रेलियामा सन् १९३१ मार्च ११ मा जन्मेका मर्डोक…विस्तृत समाचार »
सिरियामा पुरै देशभर विद्युत आपूर्ति बन्द,संकटको घण्टी बज्दै
२१,फागुन । सिरियामा पुरै देशभरनै विद्युत आपूर्ति ठप्प भएको छ । विद्युत आपूर्ति ठप्प हुनुको कारण भने अहिलेसम्म थाहा हुन सकेको छैन । बिबिसीका अनुसार विजुलीमा देखिएको अवरोधको कारण जान्ने प्रयास भैरहेको छ । त्यहाँको सबै प्रान्तमा विजुली आपूर्ति ठप्प भएको छ । सिरियाको द्धन्द्धग्रस्त गाउँमा दुई तीन घण्टामात्र विजुली आउने गरेकामा देशभरी नै आपूर्ति ठप्प भएको यो पहिलो पटक हो । यस्तै संयुक्त राष्ट्रसंघका…विस्तृत समाचार »
जुनसुकै बेला पनि परमाणु आक्रमण गर्न सक्ने उत्तर कोरियाको चेतावनी
२१,फागुन । उत्तर कोरियाका नेता किम जोङ उनले न्युक्लियर हतियार जुनसुकै बेला प्रयोग गर्न सकिने गरि तयार पारेको चेतावनी दिएका छन् । उनले बिहीबार आर्मि अफिसरसँग कुरा गर्दै सैन्य हमलाका लागि तयार रहनुपर्ने बताएका थिए । सयुंक्त राष्ट्र संघले कडा प्रतिबन्ध लगाएको समयमा किम जोङ उनको यो भनाई आएको हो । अन्तर्राष्ट्रिय कानुन विपरित परमाणु हतियार बनाएको भन्दै उत्तर कोरियामाथि २ दशक यताकै सबैभन्दा कडा…विस्तृत समाचार »
यस कारण परिवारका १४ सदस्य रेटेपछि उनि झुन्डिए
१९, फागुन काठमाडौँ । भारतको महाराष्ट्र राज्यमा पर्ने ठाणेमा हुसनेन वारेकरले १४ जना परिवारको हत्या गरेर आत्माहत्या गर्नुको कारण खुलेको छ । पछील्लो केही महिना देखि हुसनेन वारेकरको परिवारले २ करोड भारतीय रुपैयाँ शेयर बजारमा गुमाएको थियो । पुलिसले हुसनेन बैक खाताको जाँच गरिरहेको थियो। पुलिसले घरवाट पाँच मोबाइल फोन र एक ल्यापटप बरामद गरेको थियो । आमा बाबु र श्रीमती म सँग खुशी रहेका…विस्तृत समाचार »
के छ ओसामा विन लादेनको वसियतनामामा ?
१९,फागुन । आतंकवादी संगठन अल कायदाका प्रमुख नेता ओसामा विन लादेनको सम्पत्ति झण्डै तीन करोड डलर तीन अर्ब ३० करोड रुपैयाँ भएको ठुलो खुलासा भएको छ । सन् २०११ मा अमेरिकी सेनाको कारबाहीमा मारिएका लादेनको झण्डै तीन कारेड डलर सम्पत्ति रहेको खुलेको हो । अमेरिकी सेनाको विशेष कारबाही अभियानमा पाकिस्तानको एबटाबादमा लादेन मारिएका थिए । अमेरिकी सञ्चारमाध्यमले मंगलबार सार्वजनिक गरेको केही प्रतिवेदनमा लादेनको सम्पत्ति…विस्तृत समाचार »
१८,फागुन । इराकको मोसुलमा रहेको बाँध फुट्ने खतरा बढ्दै गएको बग्दादमा रहेको अमेरिकी दूतावासले दावी गरेको छ । जसका कारण लाखौं मानिस बाढीको जोखिममा रहेको भन्दै अमेरिकी दूतावासले चेतावनी दिएको छ । मोसुल बाँध फुटेमा १५ लाख भन्दा धेरै मानिस प्रभावित हुने र त्यसका कारण धेरैको ज्यान जान सक्ने खतरा छ । सन् २०१४ मा ११ दिन बाँधमा बिद्रोही संगठन इस्लामिक स्टेट आइएसले कब्जाजमाएको थियो…विस्तृत समाचार »
पाकिस्तानमा मुमताज कादरीलाई फाँसी
१७ फाल्गुन २०७२
१७,फागुन,इस्लामावाद । पाकिस्तानमा आज बिहानै कडा सुरक्षाबीच मुमताज कादरीलाई फाँसी दिइएको छ । पञ्जाव प्रान्तका पूर्व गभर्नर सलमान तासीरको हत्या आरोपमा दोषी ठहर भएका उनलाई रावलपिण्डीस्थित एक जेलमा फाँसी दिइएको हो । कादरीलाई फाँसी दिइएपछि हुनसक्ने सम्भावित घटनालाई मध्यनजर गर्दै सुरक्षा सतर्कता अपनाइएको छ ।फाँसी दिनुअघि कादरीका परिवारलाई उनीसँग भेट गर्ने अनुमति दिइएको थियो । विस्तृत समाचार »
विश्वभरमै बम झार्न सक्ने बमवर्षक ल्याउँदै अमेरिका
१७,फागुन,वासिङटन । अमेरिकाले पहिलोपटक अत्याधुनिक बमवर्षक बी–२१ को तस्बिर सार्वजनिक गरेको छ । यो बमवर्षकले विश्वको कुनै पनि ठाउँमा सजिलै बम झार्ने क्षमता राख्छ । संयुक्त राज्य अमेरिकाको सेनाले एयरफोर्सले आफ्नो अति नै गोप्य नेक्स्ट जेनेरेसन बी –२१ स्टिल्थ बमवर्षकको तस्बिर पहिलोपटक सार्वजनिक गरेको हो । अमेरिकाको एयरफोर्स विभागले जारी गरेको यो बमवर्षकले शीतयुद्वताका बनाइएको बी –५२ बमवर्षकलाई विस्थापन गर्नेछ । यसको डिजाइन यसरी बनाइउको…विस्तृत समाचार »
राहुल गान्धीलाई राष्ट्रद्रोहको मुद्दा किन लगाइयो ?
१७,फागुन,नयाँदिल्ली । हैदराबादको साइबराबाद इलाकाको प्रहरी चौकीमा कंग्रेस आईका उपाध्यक्ष राहुल गान्धी, कम्युनिस्ट पार्टी माक्र्सवादी सिपिएमका महासचिव सीताराम येचुरी र दिल्लीका मुख्यमन्त्री अरविन्द केजरीवाललगायत कयौं नेतामाथि राष्ट्रद्रोहको उजुरी दर्ता गरिएको छ। सरुरनगर प्रहरी चौकीका एसएचओ एस लिंगैयाले भने, ‘शनिबार अदालतको आदेशमा राहुल गान्धी, डी राजा, सीताराम येचुरी, अरविन्द केजरीवाल, अजय माकन, आनन्द शर्मा, केसी त्यागी, कन्हैया कुमार, उमर खालिदमाथि मुद्दा दर्ता गरिएको छ।’ लिंगैयक अनुसार…विस्तृत समाचार »
आइएसको आक्रमणमा इराकमा ३१ जनाको मृत्यु
१७,फागुन । इराकको राजधानी बग्दादमा भएको बम विस्फोटमा कम्तीमा पनि ३१ जनाको ज्यान गएको छ । शिया मुसलमानको बसोबास रहेको बग्दादको सदर सिटी क्षेत्रमा बिद्रोही संगठन इस्लामिक स्टेट आइएसका आक्रमणकारीले आत्मघाती विस्फोट गराएका हुन् । आत्मघाती आक्रमणकारीले सदर सिटीको व्यस्तबजारमा गएर आफैलाई विस्फोट गएराको प्रत्यक्षदर्शीले जानकारी दिएका छन् । विस्फोटमा परि कम्तिमा ५० जना घाइते भएका छन् । यो आक्रमण इराकमा पछिल्लो समय भएको सबै…विस्तृत समाचार »
‹ First Newer 314 315 316 317 318 Older Last ›